ISO4427 / 4130 / BS एन 12201 मानक एचडीपीई पाइप ¼ ¼ पाइली पाइप) PN5-PN20 सलाखों को दबाइ को मूल्याङ्कन संग dn20-1200mm देखि पानी को आपूर्ति को लागि काला / नीला रंग मा, 15 साल संग warranted उच्च गुणवत्ता, सीई प्रमाणपत्र द्वारा अनुमोदित & amp; BS6920 परीक्षण रिपोर्ट, एचडीपीई पाइप फिटिंग पूरा गर्नुहोस्। SUNPLAST बाट HDPE पानी आपूर्ति पाइप को थप विवरणको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !!
एचडीपीई पाइप ¼ पीपी पाइप) जल सीवर र amp; उच्च गुणवत्ता कुंवारी द्वारा बनाईएको ड्रेनेज चीन बाट PE80 / PE100 कच्चे माल, डीएन 20-1000mm बाट उपलब्ध छ। एचडीपीई जलविद्युत पाइप को थप विवरणको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !!!
HDPE पाइप (पाली पाइप) पहेंलो रङको लागि बाहिरी ग्याँसको लागि
अहिलेको सप्लायलमा पहेंलो पोल ग्याँस पाइप किन्न सक्छ। शीर्ष गुणस्तर, उत्कृष्ट चयन र विशेषज्ञ सल्लाह हाम्रो विशेषता हुन्, तपाईं हाम्रो कारखानासँग उत्पादनहरू खरीद गर्न आश्वस्त रहन सक्नुहुनेछ। र हामी तपाईंलाई सर्वोत्तम बिक्री बिक्री र समयमै डिलिवरी प्रदान गर्नेछौं।
इंजेक्शन एचडीपीई बट फ्यूजन 90 डिग्री कोहिनी एचडीपीई पाइपको लागि ढाँचा, एसडीआर 11 मा 63-800mm उपलब्ध छ। SDR17, 15 वर्ष संग warranted उच्च गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी थोक मूल्यहरु, नियमित AVAILBLE नियमित आकार को लागि, शीघ्र वितरण उपलब्ध। एचडीपीई बट फ्यूजन 90 डिग्री कोहनीको थप विवरणको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!